Beer Route - Best labiera tany Eoropa By Train | Save A Train
Home > Travel Europe > Beer Route – Best labiera tany Eoropa By Train
(Last Nohavaozina: 25/01/2021)
Na dia labiera tia mitady ny hitondra ny fitiavany ny lalana na efa manana nankany Eoropa eo amin'ny boky, take a look at the Beer Route lamasinina – Best labiera tany Eoropa By Train. Tsy ho diso fanantenana! Tsara kokoa, tsirairay ny soso-kevitra tonga dia mora amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby. No mitondra fiara ilaina, izay midika hoe tsy misy ahiahy. Just mahafinaritra!
Beer Route By Train – Best labiera In Eoropa: Amin'ny The Train Station!
Ny zavatra iray mety tsy tsapanao dia ny labiera tsara Route amin'ny Train Hita ao amin'ny maro gara. The Sheffield Tap dia iray amin'ireo tsara indrindra, mampiseho ny 30 casks ary ny drafts - ny sasany izay manasongadina voafantina avy any an-toerana sy somary mazava breweries. Afaka mahazo ny fiaran-dalamby, ka mandehana mitsidika ... ny sasany amin'izy ireo na hijanona fotsiny mametraka sy handany fotoana bebe kokoa azy ireo santionany. Ahoana no mangatsiatsiaka?!
Beer Route By Train – Best labiera In Eoropa: Delirium Village in Brussels, Belzika
ankehitriny, izao no iray manokana izay efa teo koa aho, rehefa nitsidika an'i Bruxelles, ary ny vadiko dia manao asa fitoriana mba hahita ny Best labiera tany Eoropa. Soso-kevitra: Araho ny elefanta mavokely!
Izaho avy any Afrika Atsimo ary mahatsapa kely manina te-hody, rehefa nitsidika Brussels. Noho izany, Dia nanome baiko ny tenako iray avy any an-trano Castle Lite. Mazava ho azy, nananany izany amin'ny tahiry! Izany no Tsy mahagaga toy ny delirium Cafe dia fantatra amin'ny lava labiera lisitra, nitsangana teo 2,004 marika isan-karazany tamin'ny Janoary 2004 araka ny voarakitra ao amin'ny Guinness boky fitadidiana. Ao amin'ny tolotra dia labiera avy teo ambonin'ny 60 firenena!
Ny fisotroana no misy ao amin'ny Alley kely antsoina hoe kizo de vérité / Getrouwheidsgang, afa-tsy roa zato metatra miala amin'ny Grand Place. The Jeanneke pis sarivongana dia ampitan'ny arabe avy amin'ny fidirana.
Ny fisotroana dia avy amin'ny anaran'ny labiera delirium Tremens, elefanta mavokely izay famantarana ihany koa ny fisotroana kafe decorates fidirana.
Ny gara dia a 10 minitra mandeha avy amin'ny Cafe, noho izany dia tsy mahagaga izany eo amin'ny Beer Route lamasinina – Best labiera tany Eoropa.
Beer Route By Train – Best labiera In Eoropa: Ye Olde Cheshire Cheese in London, England
Isika izay tia ny tantara dia tonga miaraka amin'ity misotro fanafihana. ny marina, Pub io tsy manana ny lehibe indrindra fantina oharina amin'ny sasany ny mpiara-monina. Fa ny zavatra tsy ampy eo amin'ny habetsahany dia mahafaka ny tantara sy ny kalitao tia azy. Milaza ny angano fa moanina brewed izany teo amin'ilay toerana talohan'ny naha-Pub. Samuel Johnson sy Charles Dickens nisotro eto, mba ho mizara ny labiera amin'ny tantara amin'izao fijanonana.
Amin'izao fotoana izao ny fananganana no tompony Sam Smith Old Brewery. Ny Pubs dia handeha-ho an'ny trano tsara tarehy, ales nentim-paharazana, ary interiors mahafinaritra. Tsy misy marika lehibe, mamirapiratra fotsiny ny fanatitra avy amin'ny labiera in Tadcaster, Atsinanana Region.
Beer Route By Train – Best labiera In Eoropa: Pilsner Urquell Brewery in Pilsen, Repoblika Tcheky
Na ny labiera efa maoderina hatramin'ny 1993, ny kilaometatra ny fahanterana LAKALY FITEHIRIZANA sisa ambanin'ny tany dia tafiditra ao anatin'ny fitetezam-paritra. Ny rambona ambanin'ny tany dia mifarana amin'ny ferment hazo misokatra ary ny barika hazo goavambe roa karazana izay efa nahazatra ny taona rehetra Pilsner Urquell.
Ny labiera avy amin'ny dity nilahatra Super barika dia, tena fotsiny, ny tsara indrindra isika lager labiera hatramin'izay nanandrana. Ary tokony hizaha toetra azy avy ho anao! Ny Pilsner Urquell Brewery Manasa anao handray fitsidihana tsy manam-paharoa. Ianao dia ho traikefa traikefa nahafinaritra sy ny fialam-boly ao amin'ny manan-tantara LAKALY FITEHIRIZANA, mianatra momba ny labiera dingana sy hanandrana ny tena tsara lager, mazava ho azy!
Beer Route By Train – Best labiera In Eoropa: Alemaina (TSY Munich)
Afaka handefa anareo ao amin'ny miafina? Ny tsara indrindra dia labiera any Alemaina tsy in Munich. Alemaina manana be miavaka isan-karazany ny labiera. Na dia maro tamin 'ny firenena isan'andro brews Mahavariana fa tsara. Saingy tsy ny labiera rehetra dia afaka ny ho tsara, na dia any amin'ny tany misy angano aza ny labiera. Raha mitady isan-karazany ary tianao ny labiera miaraka amin'ny toetra sy ny sizzle, manao ny tenanao ho famindram-po sy Mikasa ny fitetezam-paritra mankany amin'ny tany ambanivohitra Bavarian, izay labiera dia ampahany amin'ny ny kolontsaina eo an-toerana ary brewed ny tena olona amin'ny tantara mba hilaza.
Cologne any Frankfurt Lamasinina
Munich any Frankfurt Lamasinina
Hanover ho Frankfurt Lamasinina
Hamburg ho Frankfurt Lamasinina
Io mihinjitra ny faritany tany atsinanan'i Munich dia mivelatra amin'ny Bavarian Forest ny Aotrisy sy Czech borderlands ary iray amin'ireo faritra nandeha kely indrindra ny Alemaina. Izany irery ihany no mahatonga Lower Bavaria ho tsara tarehy toerana halehany, fa ny tantara sy ny kolontsaina ny labiera ho azy hanintona kokoa.
Toeram-pisotro misy labiera kely sy antonony fitopolo hiasa ao amin'io ampahany amin'ny Bavaria. Ny sasany amin'izy ireo mampiaraka niverina tany amin'ny 1400s. Iraika ambin'ny folo lahy tamin'izy ireo, na napetraky ny fiangonana, mihazakazaka amin'ny trano fitokana-monina, na ny an'ny andriana. Telo mbola niasa ny alemà barons koa ny anankiray dia ny tranainy indrindra Abbey labiera eto amin'izao tontolo izao. Lower Bavaria dia harena nafenina raha ny amin'ny labiera.
Te-hahazo ny tsara indrindra labiera tany Eoropa? (Andraikitra mazava ho azy!) Avy eo dia niaraka tamin'ny boky ny Save A Train Tsy misy miafina peaky sarany, izay midika hoe vola bebe kokoa ho an'ny labiera!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-beers-route-europe%2F%3Flang%3Dmg- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#Beer #BeerinEurope #labiera BeerTravel travelbytrain
Train Travel Austria, Train Travel Belzika, Fiaran-dalamby Britain, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Train Travel Holland, Fiaran-dalamby any Italia, Train Travel The Netherlands, Train Travel UK, Travel Europe
5 Best-Pirenena Ny Fialan-Tsasatra Any Eoropa Ny Traikefa
Fiaran-dalamby Britain, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby any Italia, Fiaran-dalamby any Soeda, Fiaran-dalamby Switzerland, Train Travel UK, Travel Europe